Isamsung iyangqina ukuba iyasebenza kwiikhamera ezihlanganisiweyo phantsi kwezikrini | I-Androidsis
Uninzi lwabenzi be-smartphone bafuna iindlela ezintsha zokuphucula amava okujonga. Ukufezekisa umlinganiso ongcono wescreen-to-body, ii-OEMs zihlengahlengisa imeko yekhamera yangaphambili.
Kumaxesha akutshanje, sibonile abavelisi bekhetha iimodyuli ze vela i-selfie (iicamera ezirhuqayo okanye ezivelayo), uyilo lwemingxunya yokubetha kwizikrini, inowuthi yokulahla amanzi, itekhnoloji yesilayidi okanye ezinye iindlela zokugcina imodyuli yekhamera yangaphambili. Nangona kunjalo, akukabikho buchwephesha okanye indlela apho abasebenzisi banokuba namava apheleleyo escreen. Isamsung isebenza kuyo.
Imithombo yeendaba yaseKorea ithi Isamsung isendleleni yokufikelela 'kubugcisa obugcweleyo' bokubonisa itekhnoloji. Usekela-mongameli weSamsung weqela lophando kunye nophuhliso u-Yang Byung-duk utyhilele ithuba lokuba 'iphelele-kwisikrini esigcweleyo' kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
I-Samung Galaxy S10
Itekhnoloji entsha yokubonisa ijolise ekuphumeleleni 'Isikrini esigcweleyo' ngaphandle kwemingxunya okanye inotshi. Zonke iisenzi ziya kudityaniswa kwiscreen, ngaphandle kokuthintela amava okujonga. Iya kunceda i-Samsung ifezekise i-100% yokuvula ngaphandle.
Itekhnoloji entsha ayizukuchaphazela isikrini kunye nokusebenza kwekhamera, kuba zombini ezi zinto ziya kusebenza ngokugqibeleleyo. Ikhamera yangaphambili kunye nekrini ziya kuhlala zihambelana kunye; Xa ikhamera yangaphambili ingasetyenziswanga, umngxunya uya kubonakala. Oku kuphakamisa ukufana okukhoyo kwiteknoloji yokubonisa iminwe yangoku.
Nangona oku kungesosihlandlo sokuqala ukuba oku kuxoxwe, iSamsung iyakwenza ngokuzolileyo, kodwa ngokulindela okukhulu, ewe. Kwizihlandlo ezininzi, isigebenga saseKorea sakhupha iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nobuchwephesha bophuhliso.
Okwangoku Iinkcukacha ezincinci kuphela kwisikrini esigqibeleleyo 'esigqibeleleyo' esivelisiweyo. Silindele ukuba ulwazi olongezelelekileyo luvele ngokuvuza nangamarhe kwiintsuku ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung iyangqina ukuba isebenza kwiikhamera ezidityanisiweyo phantsi kwezikrini
Indlela yokunciphisa umda wokusetyenziswa kwedatha kwi-Android